Iran: Fanoherana Syriana “Sady tsy Iran No tsy Hezbollah!” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Marsa 2011 4:30 GMT
Vakio amin'ny teny Français, srpski, Italiano, বাংলা, Español, عربي, English
Niresaka momba ny hiakiaky ny mpanao fihetsiketsehana Syriana nandritra ny diabe alarobia lasa teo ny mpamaham-bolongana Iraniana sasantsasany fa tamin'io diabe io no nandrenesana hiaka hoe “Sady tsy Iran no tsy Hezbollah!”. Naman'i Iran i Syria sady samy mpiakama rahateo amin'ny vondrona mpikatroka Hezbollah any Libanona.
Raha nanohy ny fanginany manoloana an'i Syria hatrany ny gazetin'ny fitondrana Iraniana, manandratra ny feony momba ny fahatezan'ny hetsika misy any kosa ny mpamaham-bolongana Iraniana.
Ao amin'ny vohikalam-pifampizarana malaza Balatarin, dia maro ny olona no namoaka rohy tamina lahatsarina mpamao fihetsiketsehana Syriana manao hiakam-panoherana ny fitondrana Iraniana regime.
Tamin'ny fanovozan-kevitra namoahan'i Iran fanambarana nandritra ny vaovao ho “manohana ny vahoaka Bahrainita” ka miantso ny tafika Saodiana hiala amin'io firenena io, sy ny tsaho an-tserasera [tsy manana ny porofon'izany izahay] fa mitady hanefa ny tafiny hanohana ny fitondrana Syriana ihany koa i Iran, no nanoratra ny mpamaham-bolongana Iraniana Iranesabz [fa]:
Gaga aho. Mitaraina momba ny hery famoretana Saodiana any Bahrain i Iran nefa mandefa ny tafiny hamoritra ny vahoaka any Syria.
Nefa dia efa naneho ny fanohanany ireo fihetsiketsehana any Libya sy any an-toeran-kafa ihany koa ny fitondrana Islamika. Irancnn niteny [fa]:
Heverin'ny Repoblika Islamika ho tsara rehefa ny olona manerana izao tontolo izao no midina an-dalambe ka manohitra, ankoatra ny Iraniana, ny Libaney, ny Syriana ary ny Venezoelana. Omaly nolazaina ho mpirotaka ny mpanao fihetsiketzeham-panoherana Iraniana, androany dia anjaran'ny Syriana indray.
Ny bolongana Siah o Sefid (midika hoa fotsy sy mainty) moa dia nanontany [fa] nahoana ny televizionam-panjakan'ny Repoblika Islamika no tsy milaza na inona na inona amin'ny vaovaon'ny fanoherana Syriana sy ny olona vonoina any.
Manoratra i Dolatemeli [fa] fa raha miongana ny mpanao didijadona any Syria dia hisy olana goavana ny politika raharaham-bahinin'ny Repoblika Islamika. Hanao izay fomba rehetra azony atao noho izany ny fitondrana Iraniana mba hahafahan'ny fitondrana Syriana mitazona ny fahefana.